Home Wararka Gudaha Shir looga hadlayay Amniga oo lagu qabtay Magaalada Garoowe
Taliyaha Qeybta Booliska Gobolka Nugaal ee dowlad Goboleedka Puntland Xuseen Cali Maxamuud ayaa Maanta oo Khamiis ah Shir Guddoomiyay Shirka Saraakiisha Amniga Gobolka Nugaal.
Saraakiisha Amniga ayaa Warbixino ka siiyay Taliyaha Qaybta Shaqada socota, isaga oo sidoo kale Su’aalo ka weeydiiyay howlaha Nabadgalyada Gobolka Nugaal oo mararka qaar ay ka dhacaan falal Amni darro.
Taliyaha Qeybta Booliska Gobolka Nugaal G/Sare Xussen Cali Maxamuud ayaa Waalidiinta ugu baaqay inay ka warqabaan Carruurtooda maadaama la galay xilliga fasixii Goobaha Waxbarashada ee degmooyinka iyo degaannada Gobolka Nugaal.
Taliye Xuseen ayaa sidoo kale Saraakiisha ugu baaqay adkeynta Amniga iyo inay u adeegaan Bulshada Gobolka Una Dhimriyaan, wuxuuna sidoo kale ugu baaqay Bulshada Hobolka inay kala Shaqeeyaan Amniga laamaha Ammaanka una soo gudbiyaan wixii khalqal gelinaya Amniga.
Degaannada iyo Degmoouinka Gobolka Nugaal ayaa waxaa mararka qaar ka dhaca falal Alni darro oo ay geystaan Al-Shabaab halka mararka qaar ay Ciidamada fuliyaan howlgallo Amni xaqiijin ah.
Previous articleAgaasimaha guud ee wasaaradda Awqaafta iyo arimaha diinta DR cumarfaaruuq ayaa war saxaafadeed ka soo saaray arimaha xajka ee sanadkaan 2022 kuna beegan 1443 ee hijriyadda.
Next articleDowladda Shiinaha oo sheegtay inay kordhin doonto taageerada ay siiso Soomaaliya
Wararkii ugu dambeeyay:- Weerar Lagu Qaaday Saldhigga Degmada Afgooye